Mon, Jul 6, 2020 at 6:34pm
‘इरान नेपालमा चिकित्सा शिक्षा, कृषि र खानी क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक’
काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपालका लागि इरानका राजदूत डा. अलि चेगेनीलेबीच बुधबार भएको भेटवार्तामा नेपालको आर्थिक समृद्धिमा कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र कृषिमा आधारित उद्योगको विकासका बारेमा छलफल भएको नेता दाहालको सचिवालयले जनाएको छ । अध्यक्ष निवास खुमलटारमा बुधबार अपराह्न भएको भेटमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले अहिले सरकारले नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन..
लोकसेवा आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्दै मन्त्री जितेन्द्र सोनल
जनकपुर, १२ जेठ प्रदेश २ का भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका जितेन्द्र सोनलले संविधान र संघीयतालाई असफल बनाउने उदेश्यका साथ आयोगले आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै पछिल्लो समयम कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन प्रकाशन गरेको आरोप लगाए। उनले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्ने बताएका छन्। प्रदेश सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारले अहिले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनको..
पेट्रोलको मूल्य घट्यो : डिजल, मट्टीतेल र ग्यासकाे मूल्य भने यथावत
काठमाण्डौ, २२ जेठ नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य घटाएको छ । आयल निगमले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै पेट्रोलको मूल्यमा एक रुपैयाँ प्रतिलिटरले घटाएको जानकारी दिएको छ । नेपाल आयल निगमका उप–निर्देशक विनितमणि उपाध्यायका अनुसार बुधबार राति १२ बजेदेखि पेट्रोलको साविकको मूल्यमा एक रुपैयाँ घटाइनेछ । घटेको मूल्यअनुसार काठमाण्डौको थानकोट डिपोको १५ किलोमिटर परिसरसम्म पेट्रोलको नयाँ खुद्रा बिक्री मूल्य ११० रुपैयाँ प्रति लिटर कायम..
नेकपाले बिहीबार जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज टुङ्ग्याउँदै
काठमाडौँ, २२ जेठ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बिहीबार जिल्ला कमिटीको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज टुङ्गो लगाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सचिवालय बैठकले जिल्ला कमिटीको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने विषयमा छलफल गर्दै बिहीबार टुङ्गो लगाउने भएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनबारे पार्टीमा नमिलेको कुरा केही नभएको र छलफल सकारात्मक दिशातिर बढेकाले अब टुङ्गिन मात्र बाँकी..
काठमाडौँ, २२ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘घरैपिच्छे फलफूल, घरैपिच्छै रुख’ भन्ने सरकारको राष्ट्रिय अभियानमा सामेल हुन सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ । विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा बुधबार भिडियो सन्देश दिँदै उहाँले जमीन अझ हराभरा बनाउन यस वर्षलाई फलफूल तथा वृक्षरोपण वर्षका रुपमा मनाउँदै अभियानलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । गत वर्ष फलफूलका बिरुवा रोप्ने महाअभियान चलाएर देशभर करीब २३ लाख फलफूलका विरुवा..
जिल्लाको इन्चार्ज र सह-इन्चार्ज टुंगो लगाउन नेकपा फेरी असफल
काठमाडौ, २२ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ठोस मापदण्ड नबनाई जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्न लागेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा जिल्ला तहका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंगो लगाउन बुधबार पनि असफल भएको छ । मध्यान्ह १२ बजेदेखि करिव २ घण्टा चलेको सचिवालय बैठकले सकेसम्म मन्त्री र सासदलाई जिल्लाको जिम्मेवारी नदिनेमा सहमति जनाए पनि नाम टुंगो लगाउन असफल भएको हो । नाम..
प्रधानमन्त्रीद्वारा सिंहदरबारमा एभोकाडोको बिरुवा रोपण [फोटोसहित]
काठमाडौँ, २२ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष शुभारम्भ गरिएको ‘एक नेपाली एक फलफूलको विरुवा रोपण अभियान’लाई सिंहदरबार परिसरमा एभोकाडोको विरुवा रोपी निरन्तरता दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीबाट गत वर्ष विश्व वातावरण दिवस (जुन ५) का अवसरमा सिंहदरबार परिसरमा फलफूलका विरुवा रोपण गरी सो अभियान आरम्भ गर्नुभएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रुपमा मनाउन नीति तथा कार्यक्रम..
प्रधानमन्त्रीको जेनेभा यात्रा : पहिलोपटक अफ्रिकी मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी
काठमाडौँ, २२ जेठ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को कार्यक्रममा सहभागी हुन जेठ २५ गते स्वीट्जरल्याण्ड जाँदैछन् । यस भ्रमणका क्रममा नेपालले दुई वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य देशसँग श्रम समझदारी हुने तय भएको छ ।हाल मन्त्रिपरिषदमा विचाराधिन रहेका यूएई र मोरिसससँगको श्रम समझदारीमा जेनेभामा दुई पक्षबीच हस्ताक्षर हुन लागेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार मन्त्रिपषिरदले विचाराधीन श्रम समझदारीका मस्यौदा..
विप्लवको तालिम केन्द्र कहाँ छ ?
काठमाडौँ, २२ जेठ । सोलुखुम्बूको महाकुलुङ गाउँपालिका–५ स्थित गुँदेलमा प्रतिबन्धित विप्लव समूहले सञ्चालन गरेको भनिएको तालिम केन्द्र प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन । आइतबार परिचालित सुरक्षाकर्मीले छेस्काम चौकी कब्जा गर्न आएका भनिएका विप्लव कार्यकर्ता र तालिम केन्द्र फेला पार्न नसकेका हुन् । गुँदेलमा तालिम केन्द्र सञ्चालन गरेको जानकारी प्रहरीलाई आइरहेकै बेला आइतबार छेस्कामको चौकीनजिक हतियारधारी समूह आएको सूचना पाएपछि प्रहरीले चौकी छाडेका..
सचिवहरूको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव
काठमाडौँ, २२ जेठ । सरकारका सचिवहरूको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष घटाउन संशोधन प्रस्ताव आएको हो । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सचिवको सेवाअवधि भने दुई वर्ष थपेर पाँच वर्ष नै कायम गर्ने प्रस्ताव छ । तर, उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका आधार कसरी पहिचान गर्ने र त्यसमा..
बन्धक बनाएर तीन महिना सामूहिक बलात्कार
काठमाडौँ, २२ जेठ । धनुषा बटेश्वरकी कक्षा ९ मा पढ्ने दलित किशोरी फागुन ११ गते साँझ बहिनीसँग खेतबाट घर फर्कंदै थिइन्। दिदीबहिनी आफ्नै सुरमा हिँडिरहेका थिए। अकस्मात् उनीहरूका अगाडि तीनजना चढेको मोटरसाइकल रोकियो। बहिनी डराएर घरतिर भाग्न सफल भइन्। ‘साँझ चौरीमा नशालु पदार्थ नाकमा सुँघाएर बेहोस बनायो। आँखामा कालोपट्टी बाँधी अपहरण गर्‍यो’, पीडित किशोरीले भनिन्, ‘हातखुट्टा डोरीले बाँधिदियो। एउटा सुई लगाइदियो। त्यसपछि..
जिल्लाकै नेतालाई इन्चार्ज र सहइन्चार्ज, ओली र प्रचण्डले पेश गरे सूची
काठमाडौँ, २२ जेठ । नेकपाको सचिवालय बैठकमा जिल्लाकै नेतालाई प्राथमिकता दिने गरी ७७ वटै जिल्लाका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने प्रस्ताव पेश भएको छ । केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट जिल्लाको इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोकिन्छ । दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेपछि मंगलबारबको बैठकमा प्रस्ताव पेश भएको हो । मन्त्री र सांसद भइरहेकालाई दोहोरो जिम्मेवारी नहुँने गरी तोक्नुपर्ने धारण वरिष्ठ..
के हो इद उलफित्र ? आज सार्वजनिक बिदा, यसो भन्छन् राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, २२ जेठ । मुस्लिम धर्मावलम्बी बुधबार (आज) ‘इदुल्ल फित्र’ पर्व खुसियालीपूर्वक मनाउँदैछन् । हिजरी पात्रोको नवौं ‘रमजनाल मुबारक महिना’भरी रोजा (उपवास) बसेपछि अन्तिम दिनमा इद उलफित्र मनाइन्छ । इदको दिन सबेरै नुहाई धुवाई गरि मिठो, गुलियो परिकार खाइन्छ/ख्वाईन्छ । खासगरी सेवई, खजुर (अरबमा फल्ने फल), मिष्ठान्न परिकार खाईसकेपछि पुरुषहरु सुकिला, सफा र नयाँ कपडाका साथमा बास्नादार अत्तर लगाई इदगाह (इदको नमाज..
नेकपालाई केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनमा सकस ! बुधबार टुङ्गो लाग्ने
काठमाडौं, २१ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी )नेकपा०ले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनबारे बुधबार टुङ्गो लगाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सचिवालय बैठकले बुधबार कार्यविभाजन टुङ्ग्याउने गरी छलफल शुरु गरेको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यविभाजनको कार्यसूचीमा छलफल शुरु भएको छ । छलफल सहमति नजिक पुगेको छ । कार्यविभाजनको कार्यसूचीमा छलफल शुरु भएको छ । छलफल सहमति..
काठमाडौँ, २१ जेठ मुस्लिम धर्मावलम्बीको पर्व ‘इद उल फित्र’ पर्वमा सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी सो पर्वमा बुधबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको जनाएको हो। गृहको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार सो विदा दिइएको उल्लेख छ। ‘जेठ १० को मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार मुस्लिम धर्मावलम्बीको पर्व ‘इद उल फित्र’का लागि सार्वजनिक विदा दिइएको जानकारीको लागि अनुरोध छ,’ गृहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विदाअनुसार..
राजनीतिक दबाबले न्यायिक समितिले काम गर्न सकेन !
वीरगञ्ज, २१ जेठ पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ममता महतो थारूको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले राजनीतिक दबाबका कारण काम गर्न नसकेको बताइएको छ । पश्चिमी पर्साको दुर्गममा रहेको सो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म ९५ विभिन्न मुद्दा रहेकामा हालसम्म ७० मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । अधिक सङ्ख्यामा मुद्दा फछ्र्याेट भए पनि बाँकी रहेका मुद्दा राजनीतिक दबाबका कारण फछ्र्योट हुन नसकेका न्यायिक समितिका संयोजक महतोले..
लोकसेवा विज्ञापन विरुद्ध जनकपुरमा चर्को नाराबाजी
जनकपुर, २१ जेठ लोकसेवा आयोगले सातै प्रदेशमा गरको विज्ञापनको सबै तिरबाट आलोचना भइरहँदा जनकपुरमा भने यसले उग्र रुप लिएको छ। मंगलबार दिउँसो प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा युथ एक्सन फोर्सले विज्ञापनको विरोधस्वरुप प्रदर्शन गरेको छ। भानुचोकमा युवाहरुको समूहले बाटो अवरुद्ध पारेर संघीय सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन्।..
'भारतको चुनावी परिणाम नेपाली राष्ट्रवादी र हिन्दूवादीहरुका लागि प्रेरणा'
रुपन्देही, २१ जेठ राष्ट्रवाद र हिन्दूत्वलाई प्रमुख मुद्धा बनाएर भारतीय जनता पार्टीले प्राप्त गरेको विजय नेपाली राष्ट्रवादी र हिन्दूवादीहरुका लागि प्रेरणा बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको भनाइ छ । उहाँले नेपाली राष्ट्रबादी र हिन्दूवादीहरुलाई भारतको लोकसभा चुनावको परिणामले प्रेरणा प्रदान गरेको बताउनुभएको छ । यद्यपि नेपालमा कुन मुद्दा र राजनैतिक विचारधारको उठान र सम्बाेधन गर्ने अधिकार भने नेपाली नागरिककै भएको उहाँले..
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयद्वारा ५ पेट्रोल पम्प तथा उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौँ, २१ जेठ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयले पाँच पेट्रोल पम्प तथा उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौलको मापदण्ड विपरीत सञ्चालित पेट्रोल पम्प तथा उद्योगलाई मुद्दा दर्ता गरेको हो । कार्यालयले मैतीदेवी पेट्रोलियम सप्लायर्स मैतीदेवी, चुच्चेपाटी फ्युल सेन्टर चाबहिल, भद्रकाली आयल स्टोर गोठाटार, न्यू बङ्गलामुखी आयल स्टोर्स सानोभ¥याङ र माः पलाञ्चोक धन्द्रे भीमसेन बेकरी उद्योग..
नेकपा एकता प्रक्रियामा मतभेद ! केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन भोली
काठमाडौं, २१ जेठ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन भोलीसम्म सक्ने भएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा झण्डै दुई घण्टा बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्री र सांसदलाई जिल्लाको जिम्मेवारी दिने–नदिने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन भोलीसम्म सक्नेबारे छलफल भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका..
राष्ट्रियसभामा बजेटमाथिको बाँकी छलफल जेठ २७ मा, न्यायसहितको विकास स्पष्ट : सांसद
काठमाडौँ, २१ जेठ । राष्ट्रियसभामा ‘आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफल जारी रहेको छ । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले यही जेठ २३ गतेसम्म सामान्य छलफल हुने भनिए तापनि २३ गतेको बैठक २७ गते बस्ने जानकारी दिनुभयो । बजेटमाथिको सामान्य छलफल मंगलबारदेखि तीन दिनसम्म चल्ने भनिएको थियो । बजेटमाथिको छलफलमा सांसद कोमल ओलीले बजेट जनचाहनाको दस्तावेजका..
मुसलमान समुदायको रोजा कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी नेपालगञ्जमा
राँझा, २१ जेठ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मुसलमान समुदायको रोजा ‘इफ्तार’ कार्यक्रममा सहभागी हुन आज नेपालगञ्ज आइपुग्नुभएको छ । उहाँ अपराह्न साढे २ बजे नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आइपुग्नुभएको राष्ट्रपतिको सचिवालयका उपसचिव दीपा शर्माले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारी अहिले नेपालगञ्जस्थित एक होटेलमा बस्नुभएको छ । साँझ साढे ५ बजे यहाँस्थित सिद्धार्थ कटेजमा शुरु हुने रोजा इफ्तार कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।..
गृहले गर्‍यो २६ जना सहसचिव तथा उपसचिवको सरुवा [विवरणसहित]
काठमाडौँ, २१ जेठ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका २६ जना सहसचिव तथा उपसचिवको सरुवा भएको छ । गृह मन्त्रालयले मंगलबार नुवाकोट, कपिलवस्तु, रुपन्देही, गोरखा, सर्लाही, काभ्रे, सिरहा, डोटी, उदयपुर, सुनसरी, नवलपरासी (सुस्ता पश्चिम), रुकुमलगायतका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र निर्देशकहरुको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको हो । गृहले प्रमुख तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको हो । ..
नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै, ओली र प्रचण्डले गरे माधव नेपालसँग छलफल
काठमाडौं, २१ जेठ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आलोपालो सरकार संचालन गर्ने सहमति भएको अभिव्यक्ति दिएपछि गृहकार्य नपुगेको नाममा पटक पटक सारिँदै आएको नेकपाको सचिवालय बैठक मंगलबार बस्ने तय भएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्यविभाजन टुंगो लगाउने प्रयासमा सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार दिउँसो ३ बजे बैठक बस्न लागेको हो । यो बैठकअघि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा..
छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १३ वर्ष बित्दा पनि भेदभाव कायमै
काठमाडौँ, २१ जेठ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस आज विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । सोही दिनको सम्झनामा वर्तमान सरकारले हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा दिवस..
नेकपामा ध्रुवीकरण, खैलाबैला मच्चियो
काठमाडौँ, २१ जेठ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकता हुँदाको सहमतिको बलमा प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षमध्ये एउटा पूर्ण जिम्मेवारीको पद लिन दबाब बढाएपछि नेकपाका शीर्ष नेताबीच ध्रुवीकरण बढेको छ । दाहालले केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको साढे दुईवर्षे कार्यकालपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने वा अध्यक्ष हुने अभिव्यक्ति दिएपछि नेताहरू पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका हुन् । समय आएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा पूर्वमाओवादी केन्द्रभित्र स्पष्ट धारणा छ..
निश्चित भयो ६ करोड आउनेः अब संसद् किन धाउने ?
काठमाडौँ, २१ जेठ । प्रदीप गिरि भन्दै थिए, ‘या त यो बजेटबाट समाजवाद शब्द हटाइदिनुस्, म खुसी हुनेछु, या सहरलाई गाउँ बनाइदिनुस् म तपाईंलाई धन्यवाद दिनेछु ।’ बजेटबारे एउटा आधारभूत कुरा भन्छु । उर्दूमा एउटा कथन छ– लुकमे के फेर से खुदा जुदा हो जाता है । उर्दूमा एउटै शब्दमा चन्द्रबिन्दु राखे त्यो खुदा (ईश्वर) हुन्छ, हटाए जुदा (विछोड) हुन्छ । बजेटको..
काठमाडौँ, २१ जेठ । सोलखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीबाट २५ कोस टाढा पर्छ महाकुलुङ गाउँपालिका। उक्त गाउँपालिका सोमबार दिनभर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा परिरह्यो। सञ्चारमाध्यमका लागि त्यो ठाउँ दिनभर चासो र खोजीको विषय बनिरह्यो। कारण हो गाउँपालिका–३ छेस्काममा रहेको प्रहरी चौकी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताकार्यकर्ताले रातभर कब्जा लिएको ‘सनसनीपूर्ण समाचार’। विप्लवका कार्यकर्ता प्रहरी चौकी कब्जा गर्न आएको सूचनापछि त्यहाँ कार्यरत प्रहरी सुरक्षित..
स्थानीय तहका यी अधिकार कानुन बनाएर कटौती गरिँदै
काठमाडौँ, २१ जेठ । अघिल्लो वर्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता विभिन्न कानुनको संशोधन तथा ऐनले स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार,’ ‘जनताको घरदैलोमा सरकार’लगायत नारा अघि सारेका थिए । उनीहरूको दाबी थियो– स्थानीय सरकार गठनसँगै जनता बढी अधिकार सम्पन्न भएका छन् । तर, सरकारमा पुगेपछि संघीय (केन्द्र) सरकार र संघीय संसद्ले स्थानीय तहको..
काठमाडौँ, २१ जेठ । सगरमाथा आरोहण गर्न २५ हजार अमेरिकी डलर (करिब २८ लाख) लिने आरोहण कम्पनीले आरोहीको मृत्यु हुँदा भने करिब एक करोड रुपैयाँसम्म असुल गर्न थालेका छन्। आरोहीको मृत्युपछि आधार शिविरसम्म शव ल्याउँदा हुने ठूलो आम्दानीले आरोहणप्रति नकारात्मक धारणा बढ्ने आशंका यस क्षेत्रका व्यवसायीले गर्न थालेका छन्। आरोहणमा गुणस्तरीय सेवा दिने र दुर्घटना कम गराउन सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नसमेत..
Results 9755: You are at page 146 of 326